crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> 10-kii Diyaaradood ee sida yaabka leh loo waayay!! | HimiloNetwork
10-kii Diyaaradood ee sida yaabka leh loo waayay!!
Posted by: Zakariya in Wararka September 30, 2015	0 254 Views
Iyada oo dhacdo kasta ay la timaado marmarsiiyo, hadana waxaa wali jira dhacdooyin aan xalkooda laga sal-gaarin jeer iyo maanta tiiyoo aragtiyo badan lasoo bandhigo.
Maqnaanshaha diyaaradeed ama in la waayo waa jaad kamid ah dhacdooyinka aan xalkooda laga sal-gaarin. Habada, http://himilonetwork.com://himilonetwork.com, waxay idin soo gudbinaysaa 10-kii diyaaradood oo mar kaliya hawada laga waayay; iyo wixii ay geysteen dhimasho iyo dhacdo ahaan.
Diyaaraddii Amelia Earhart’s Plane—oo lagu waayay badweynta dagan ee Pacific.
Diyaaaraddii Flight 19 oo iyadna lagu waayay saddex-xagalka Bermuda.
Diyaaraddii Stolen Boeing 727-223 Angola Plane—waxaa la rumeysnaa inay ka baxsaneysay qowleysato rabtay inay af-duubtaan deeedna baqa-cararkii ay ku luntay. Angola oo laga lahaa iyo xittaa qowleysatadii af-duubi rabtay midkood meel kuma ogaan taniyo xilligaas.
Diyaaraddii Star Ariel Star Tiger—labadan diyaaradood waxaa la waayay sanadkii 1948-kii. Waxayna sidoo kale ku lumeen saddex-xagalka Bermuda.
Diyaaradihii Flying Tiger Flight 739—diyaaradahan ayaa waxaa saarnaa 96 askari oo Ameerikaan ah kuwaas oo ka yimid California kuna sii jeeday Vietnam. Shidaal ka go’ay awgeed waxay ku dageen Filibiin hayeeshe markii ay ka caga laabteen Filibiin, dib looma arag raqdii ay ku baxeen.
Diyaaraddii Flight 370 of Malaysian Airlines—tani waa mid kamid ah dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee shil diyaaradeed la xiriira. Waxaa la waayay March 8, 2015.
Diyaaraddii Glenn Miller—waxaa la waayay December 15, 1944-kii.
Diyaaraddii Varig Boeing—waxaa laga lahaa Baraziil. Iyada iyo rakaabkeeda waxaa la waayay sanadkii 1979-kii.
Diyaaraddii DC-4 Canadian Air Lines—July 21, 1951-kii ayay kasoo duushay Japaan iyada oo kusii jeeda Maraykanka. Taniyo waagaasna, dib looma arag raqdii ay ku baxday. Waxaa saarnaa 36-rakaab iyo 6-kamid ah shaqaalihii diyaaradda.
Diyaaraddii Lake Michigan Crash of 1950—waxaa lala waayay 58-rakaab iyada oo ku burburtay biyo dhexood sanadkii 1950-kii.
Nagala soo xiriir; Himilonews@gmail.com
Previous: Mugabe oo ceebeeyey Ragga is-fuula
Next: 5-ta goobood ee loogu booqashada badan yahay
Bisha Ramadan: 14 milyan ayaa booqatay Masjidka Nabiga
Muslim – si uu Alle ugu dhawaado awgiis – u dhisay in ka badan 90 Masaajid!
La kulan – Deeqsiga Maalinle u quudiya Kumaankun Danyar ah!